वीरगञ्ज । गतवर्ष वीरगञ्ज नाकाबाट निकासी हुने मुख्य वस्तुको सूचीमा रहेका अधिकांश उत्पादनको निर्यात यो वर्ष घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्ता वस्तुको निकासी घटेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निकासीको सूचीको पहिलो स्थानमा रहेको प्रशोधित पाम आयल यो वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा निकासीको सूचीबाटै हटेको छ । यो उत्पादन निकासी हुने मुख्य २० वस्तुको सूचीमा पनि छैन । गतवर्ष नेपालबाट भारतमा रू. १८ अर्ब ३१ करोडको पाम आयल निर्यात भएको थियो ।
वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै रू. ११ अर्ब ७२ करोड मूल्यबराबरको १ लाख ७ हजार मेट्रिकटन (मेटन) पाम आयाल निकासी भएको तथ्यांक वीरगञ्ज भन्सारसँग छ । वीरगञ्ज क्षेत्रमा १४ ओटा ठूला उद्योगले तेल उत्पादन गर्दछन् ।
भारतले पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि गत वैशाखयता निकासी रोकिएको छ । पाम आयल निर्यात गर्न नपाएका उद्योग सोयाबिनको प्रशोधित तेल निकासीमा केन्द्रित भएको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुङ्गटाले बताए । ‘पाम आयल निकासीलाई लक्षित गरेर यो क्षेत्रका अधिकांश उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका थिए । लगानी डुब्ने चिन्तामा डुबेका उद्यमीलाई सोयाबिन तेल निकासीले केही राहत दिएको छ,’ रुङ्गटाले भने ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिर अन्त्यसम्ममा रू. ९ अर्ब १० करोडबराबरको ६३ हजार १०१ मेट भटमासको प्रशोधित तेल निर्यात भएको छ । भटमासको तेल निकासीको शीर्ष स्थानमा रहेको वीरगञ्ज भन्सारका अधिकृत रमेश सुकमनीले बताए । गतवर्षको समीक्षा अवधिमा करीब रू. २ अर्बको १४ हजार ९२४ मेटन यस्तो तेल निर्यात भएको जानकारी सुकमनीले दिए ।
यो नाकाबाट निकासी हुने मुख्य वस्तुमा रहेको जुस र स्पोर्टस सुजको निर्यात पनि खस्किएको वीरगञ्ज भन्सारले बताएको छ । चालू वर्षमा निकासीको दोस्रो स्थानमा रहेको जुसको निकासी मूल्यका आधारमा ६ प्रतिशतले घटेको छ ।
नाकाबाट चालू आवको मङ्सिरसम्ममा रू. १ अर्ब ५१ करोडको जुस निकासी भएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । वीरगञ्ज नकाबाट डाबर नेपालले जुस निकासी गर्दछ ।
गतवर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्म यहाँबाट १४ लाख ४७ हजार जोडी जुत्ता निर्यात भएकोमा यो वर्ष ११ लाख १ हजार जोडीमा झरेको सुकमनीले जानकारी दिए । सेन्थेटिक यार्नको निकासी पनि १२ प्रतिशतले घटेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीका कारण आवागमन, उत्पादन र बजारमा परेको नकारात्मक असरले यस्ता उत्पादनको निकासी प्रभावित भएको उद्यमीहरूले बताएका छन् । दन्तमञ्जन, कपडा, स्टीलका भाँडाको निकासी घटेको छ । च्यावनप्रास, त्रिफला, दन्तमन्जन, उनी कार्पेट, पिना, आयुर्वेदिक औषधिजस्ता उत्पादनको निर्यात भने बढेको भन्सारले बताएको छ ।